निसन्तान भनेर आक्षेप लगाउने 'प्रचण्ड'को बहादुरी हो ? | Dainik Hub Dainik Hub
१२ माघ २०७७, सोमबार ०९:३१
पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निसन्तान भनेर दम्भका साथ आफ्नो बहादुर देखाउनु भएको छ । निसन्तान नहुनु आफ्नो दोष नभएको बताइरहदा के प्रधानमन्त्री ज्युको चाहि सन्तान नहुनु गल्ति हो यसको उत्तर तपाइले दिनुपर्छ कि पर्दैन ‘प्रचण्ड’ ज्यू ??
तपाइको यो प्रहार प्रधानमन्त्री माथिको मात्र नभई संसारभरी रहेका करोडौ निसन्तान दम्पति माथिको प्रहार हो । करोडौं निसन्तान दम्पतीको भावना माथि ठेस पुर्याउनु भएको छ, भाषण दिनुभएको छ । हो सन्तान नहुने दम्पतिको सन्तानको चाहना हुनु स्वाभाविक हो । तर शारीरिक असक्षमतामाथि तपाइले आरोप लगाइरहदा आफैले निसन्तान बनाएका थुप्रै आमाबुवाको तस्बिर आखामा झल्झली आउनुपर्ने होइन र ??
छोरा प्रकाशको निधनमा तपाईको आखाबाट झरेका बलिन्द्र आशुका धारामाथि तपाईलाई कसैले अट्टहास गर्दा कति पिडाबोध भएको थियो होला ? त्यो एकपटक महसुस गर्नुस ! हजारौ आमाका काख रित्तो पार्दा अलिकति पनि लज्जा र ग्लानिबोध भएन कमरेड ?? बुर्जुवा शिक्षाका नाममा शिक्षाबाट बन्चित गराइएका त्यसबेलाका हजारौ कलिला मष्तिस्क र आफ्नो बालबच्चालाई पढाएर लेखाएर ठुलो मान्छे बनाउला भनेर सपना बोकेका त्यो सन्तानहरु सहितको आमाबुवालाई कति पिडाबोध भयो होला ? एकपटक आफुले आफैलाई ति सहिद बनाइएका सन्तान भएर सोच्ने की ?
सन्तान हुँदाहुँदै पनि निसन्तान बनेका ति आमाबुवाको स्थानमा आफुलाई राखेर प्रश्न सोध्नुस त् कमरेड कति पिडाबोध हुन्छ होला ?? अझैपनि तपाईका पद लोलुपताका कारण कति अबोध बालबालिकाहरु फस्ने हुन्, कति सन्तान सहितका आमाबुवा निसन्तान हुने हुन्, कति सन्तान जन्माउँन योग्य व्यक्तिहरुलाई निसन्तान हुने गरि शारीरिक तथा मानसिक पिडा दिनुहुन्छ होला थाहा छैन । तर कमरेड राष्ट्रको एक जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले तपाईलाई विनम्रतापूर्ण आग्रह गर्दछु ‘तपाइँ फेरिनुस, आफ्नो पदप्राप्तिको आशक्तिलाइ छोडिदिनुस, राष्ट्र निर्माणको लागि जिम्मेवार बन्नुस् ।’
कसैको आग्रहमा हाम्रो नेपालको संबिधानमा जबर्जस्ति घुसाइएको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना अन्तर्गत रहेको प्रादेशिक संरचनालाइ हाम्रै मौलिक ढाचामा लैजाउ । आवस्यक परेमा यो प्रणालीमाथि निर्मम प्रहार गरौ, बहुसंख्यक जनता हिन्दु धर्मावलम्बी भएको देशमा धर्म निरपेक्षता खारेज गरिदिउ । सायद २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको हिसाबले भन्नुपर्दा धर्म निरपेक्षता जिन्दावाद ! को नारा लगाउने एक जनाको पनि अवाज सुनिएको थिएन । धर्म निरपेक्षताको नारा लगाउने ५ जना उभ्याएर देखाइदिनुस कमरेड; कसले कसले बोकेको र लगाएको थियो धर्म निरपेक्षताको नारा ।
तपाइँ कम्युनिस्टहरुलाई इसाई सँग नजिक भएको देख्नु हुन्छ तर यो तपाइको व्यक्तिगत कुण्ठा हो । आफ्नो पितापुर्खाको धर्म भन्दा बाहिरि धर्म तपाइलाई किन र कसरि प्यारो हुन् पुग्यो ? कुन तत्वले तपाइँमाथि षड्यन्त्र गरेको छ ? खुलाइदिनुस आज । राष्ट्रलाई समृद्व बनाउनका लागि तपाईलाई इतिहासले स्वर्णिम मौका दिएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को यो महाभियानमा साथ दिनुस तबमात्र तपाइले कैयौ सन्तानका बुवालाई निसन्तान बनाएको र कैयौलाई सन्तान उत्पादन नै गर्न नसक्ने बनाइदिनु भएको अक्ष्यम अपराधको माफी हुन् सक्छ । अन्यथा ति तमाम आमाबुवाको श्रापबाट तपाइँले कहिले पनि मुक्ति पाउनुहुने छैन ।